Vagadziri bhegi - China Backpack Fekitori, Vatengesi - Chikamu 2
TIGERNU yemafashoni dhizaini bhegi kune vechidiki
Unyanzvi: Bhegi bhegi dhizaini yemafashoni ine saizi ye29 * 14 * 45cm (L * W * H) .Iyo huru imba ine yakawanda divider uye yekuvaka-mune yakapetwa ruoko ruoko inokwana kusvika 15.6 ″ laptop. zvaunoda zvezuva nezuva, mabhuku, mbatya, simba kubhengi, headphone nezvimwewo. Imba yepamberi ine akawanda akapatsanura homwe inobatsira kuronga ako madiki stuffs, zvinyoreso, chikwama, runhare, tambo nezvimwewo Rimwe divi zipi muhomwe uye rimwe divi pajira riya muhomwe; back anti kuba muhomwe yezvinhu zvakakosha.
Kuchengetedzwa maficha: Iyo fashoni bhegi rakagadzirwa neyakajeka splashproof & kukwenya kusagadzikana nylon, yakasimba uye inogara kwenguva refu. Iyo yakapetwa kaviri mazino mana epamutemo akakiyiwa zipi inopa yakanyanya kuchengetedzwa kwekufamba kwako uye nehupenyu hwezuva nezuva.Imberi yepakati yebhuruu neyeorenji jira sekushongedza, zvichiita kuti chikoro bhegi riwedzere fashoni uye inotonhorera.
Iri bhegi ndeye fashoni dhizaini bhegi bhegi, inokodzera varume, vakadzi, vadzidzi chero chinangwa. TIGERNU bhegi rakanakira chikoro, yunivhesiti, kupera kwevhiki, kufamba pano neapo, majimu, basa rezuva nezuva, bhizinesi, rwendo, musasa uye kukwira makomo.Zvakanakira kushanda sebhegi remabhuku, bhegi rechikoro, bhegi rakasununguka, kabhegi kemabhuku.
TIGERNU fashoni chikoro bhegi
Unyanzvi: Iyo fashoni chikoro bhegi saga iri 28 * 13 * 39cm (L * W * H) .Iyo huru imba ine padded laptop homwe inobata kusvika ku14 ″ laptop.Iyo yakafara ine akawanda muhomwe muhomwe dzemabhuku ako, simba bhengi, headphone, wallet uye zvichingodaro.Iyowo inobatsira kuchengetedza zvinhu zvako zvakarongeka. Iyo yekumberi zipi homwe yeako ari nyore kuwana zvinhu.Ungagone kuchengeta ako akakosha zvinhu kumashure anti anti kuba muhomwe.Iye zvakare akareruka uremu, chete anorema 0.8kg.
Chinyorwa: Iyo yakagadzirwa nesplashproof & anti fouling oxford, iyo yakasimba uye yakasununguka. Inodzivirira zvinhu zvako kubva kumvura diki uye bhegi rinogona kupukutwa rakaoma uye rakachena nyore.
Zvimiro: Iyo zipi inokiyiwa, chengetedza kumwe kuchengetedzwa kwezvinhu zvako. Tambo yepafudzi inogadziriswa uye yakaputirwa nesiponji yepasi iyo inobatsira kudzikisa kumanikidza kweiyo yakazara yakazara bhegi.
Ruvara rwepinki isarudzo yakanaka kune vese vasikana seye fashoni chikoro bhegi.
TIGERNU yekutanga dhizaini yakanakisa mudzidzi bhegi revana
Iri bhegi rakanakisa uye rakakodzera vana vadiki.
• kurema uremu, sarudzo yakanaka yevana
• yakachengeteka zvinhu, eco-inoshamwaridzika uye yemhando yepamusoro, yeergergia yemahara uye isingakuvadzi
• yakasungwa uye yakawedzera bhanhire repafudzi, ergonomic dhizaini inobatsira kudzikisa mutoro pane iwo muswe
• kumashure kwepaneru yakasungwa zvakanaka nesiponji uye mesh inogona kuwedzera kuyerera kwemhepo
• homwe dzakawanda nezvikamu zvinobatsira kuchengetedza zvinyorwa zvakarongeka uye zviri nyore kuwana
• chinogadziriswa bhanhire
• yekuratidzira tambo pane tambo uye mativi homwe, zvichiita kuti vana vawedzere kunetseka panguva yehusiku
• maviri mavara anowanikwa, bhuruu nepingi, sarudzo yakanaka kune vese vakomana nevasikana
• ese anotakura zvikamu akasimbiswa, akasimba uye akasimba
Sarudzo yakanaka yevana sebhegi rechikoro.
TIGERNU fashoni dhizaini yakawanda chinangwa bhegi
Kune akawanda ekuchengetera mupanda uye homwe dzinosanganisira imwe yakapetwa 14- laptop laptop. Yakakwana yevarume, vakadzi kana vadzidzi 'kushandiswa kwezuva nezuva kubhizinesi, chikoro, kukoreji uye nekufamba.
Hunhu hwezvinhu: Iri bhegi rakagadzirwa neasplashproof & kukwenya kusagadzikana oxford, yakasimba, eco-inoshamwaridzika. Zippers uye buckles ndeepamhando yepamusoro neTIGERNU logo.
Slim Dhizaini & Super Anoronga: Slim mativi maonero anotarisisa bhizinesi-zvisina kujairika mashandisirwo akakwana. Iyo fashoni bhegi saga iri 25 * 18 * 36cm (L * W * H). kuchera kutenderera muhombodo. Zvese zvigadzirwa zvichave zvakarongeka. Laptop compartment: inobata 14inch laptop.
Sarudzo Yakanaka: Chipo chakanaka chevadzidzi vekoreji yepamusoro vadzidzi vevakomana, vasikana, vechidiki, vakuru.
TIGERNU slim dhizaini bhegi rechikoro chevadzidzi vechikoro chesekondari
Unyanzvi: Uyu saizi remubhegi remudzidzi iri 30 * 18 * 47cm ine rakasiyana laptop chikamu chinokwana kusvika 15.6 - laptop. Laptop mupanda uri pasi pefudzi bhandi, ichikupa imwe chengetedzo. Kamuri hombe hombe ine nzvimbo zhinji dzinopa nzvimbo yakakwana yezvido zvako zvezuva nezuva sehembe, mabhuku, zvikwama, mapiritsi uye zvichingodaro. .
Hunhu hweMhando: Iyo bhegi reUSB rakagadzirwa neasplashproof & kukwenya kusagadzikana nylon, inova yakasimba uye eco-inoshamwaridzika. Iyo isina mvura nzira mbiri yekuvhura yakakiya zipi yeiyo huru kamuri inopa anti-kuba dziviriro parwendo rwako.
Tigernu fashoni dhizaini yakawanda-yechinangwa bhegi
Hombe inokwana bhegi: Makamuri mazhinji ekuchengetera anobata malaptops anosvika 15.6 inch.Sparent main compartment of this backpack, yakakodzera mabhuku, A4 Mafolder, mbatya uye zvimwe zvinodiwa zvezuva nezuva.Mapoketi maviri epamberi, maviri eparutivi homwe uye imwe yakavanzika kumashure homwe inokupa iwe nzvimbo yakakwana yezvinhu zvako zvidiki uye wozvichengeta zvakarongeka.
Dhizaini Inogadzikana: Kudzoserwa rutsigiro sisitimu ergonomic yakagadzirirwa padded bhanhire tambo uye kumashure. Yakashongedzerwa nechinogadziriswa chipfuva bhegi uye chinogadziriswa chindori hasp, inoita kuti iwe ugone kudzora tambo kureba zvakasununguka uye inoderedza mutoro wehuremu.
Yakasimba uye Anti Kuba: Iri bhegi rakagadzirwa neasplashproof & kukwenya kusagadzikana nylon, yakasimba, inogara kwenguva refu uye eco-hushamwari. Iyi yemhando yepamusoro inodzivirira mvura isingadzivisike Oxford yemvura isingatarisirwe, pukuta mumaminitsi mashanu, hapana mucherechedzo wakasara Iyo anti-ponji 4 zino zipi yekamuri huru inopa kwakanyanya kufamba kwekuchengeteka kwauri.
Zvimiro: Neyakavakirwa-munzeve nhare, bhegi iri rinokutendera kuti unakirwe nemumhanzi chero nguva chero kupi pasina kutora zvigadzirwa. Yakavanzwa laptop kamuri pazasi pefudzi bhanhire inogona kukiya.Magirazi hanger uye kadhi rinobata papfudzi tambo kuti iwe uwane nyore kuwana magiya aya.
Sarudzo Yakanaka: Tigernu bhegi rakakura rechikoro, kuyunivhesiti, kupera kwevhiki, kufamba dzimwe nguva, majimu, basa rezuva nezuva, bhizinesi, rwendo, musasa uye kukwira makomo.Zvakanakira kushanda sebhegi remabhuku, bhegi rechikoro, bhegi risina kujairika, kabhegi kemabhuku.
Multi-chinangwa Backpack: Kune akawanda makamuri ekuchengetera anosanganisira imwe iPad bin uye imwe yakaparadzaniswa yakakoshwa komputa yemakamuri ine magirazi akamiswa dhizaini. Yakakwana yevarume, vakadzi kana vadzidzi 'kushandiswa kwezuva nezuva kubhizinesi, chikoro, kukoreji uye nekufamba.
Slim Dhizaini & Super Anoronga: Bhegi rine saizi mbiri, saizi imwe ndeye 28 * 14 * 41cm (L * W * H), inokwana laptop kusvika pa14 ″; imwe saizi iri 33 * 20 * 49cm (L * W * H), inokwana palaptop inosvika ku17 ″. Iyo yakatetepa mativi ekuona inowirirana nebhizimusi-yekushandisa zvisina tsarukano.Imwe yakasarudzika laptop yemakamuri pasi pefudzi bhanhire inokupa iwe kuchengetedzeka uye kuvanzika.Imwe huru kamuri yakafara zvakakwana kune zvako zvese zvezuva nezuva zvaunoda; homwe imwe yekumberi nehomwe mbiri dzeparutivi kuitira nyore kuwana; imwe yakavanzwa kumashure zipi muhomwe yakakwana kune ako akakosha. Iri bhegi rinogona kukubatsira kubvisa kuchera kwakatenderedza muhombodo. Zvese zvigadzirwa zvichave zvakarongeka.
TIGERNU vintage style mudzidzi laptop bhegi
Vintage dhizaini TIGERNU bhegi rinopa inoshanda dziviriro yechigadzirwa uye muti-unoshanda bhegi
• Yakakura density nylon zvinhu, mhando yakanaka, splashproof, anti-kubvarura uye eco-hushamwari.
• Ine furemu-yakachena-yakarongedzwa furemu, iyi pack ine padded laptop sleeve uye piritsi sleeve kudzivirira yako Laptop uye zvimwe zvishandiso kubva mazuva ese mapundu.
• Yayo yakasungirirwa bhanhire tambo inonunura yakasununguka kutakura pamusoro pamafudzi.
• Iyo yakanaka padded uye ine hutano yekukwiza basa kumashure dhizaini inogona kuchengetedza huremu hwakaenzana, kuyerera kwemhepo uye kudzikamisa kumanikidza uye kugadzikana kupfeka.
Kukura kwayo kuri 30 * 15 * 47cm (L * W * H) Iine kamuri hombe hombe ine homwe zhinji dzezvakakosha, maviri akasungwa zipi yekukasira-kumberi kumberi uye imwe yepamusoro zipi homwe, uye maviri epazasi zipi homwe, ndiyo rongedza rakanakira rako rezuva nezuva giya uye chengeta bhegi rako rakarongedzwa uye rakarongedzwa.
• Zippers anoshandiswa akagadzirwa zvakanaka uye akagadzirwa neTIGERNU logo, kuputika-chiratidzo uye kumeso kushandisa. Iyo zipi hombe ndeye TIGERNU patentti yakapetwa kaviri yakapetwa inokiyiwa zipi, ichipa maitiro chengetedzo yerwendo rwako.
Iri bhegi rakagadzirirwa multi-chinangwa. Icho chisarudzo chakanaka chevarume, vakadzi, mudzidzi webasa, kufamba, chikoro, kuenda kukambi, kupikiniki, kushopu, kuungana kwevhiki.
<< <Yapfuura 123456 Inotevera> >> Peji 2/9